मेरो आईफोन अनुप्रयोगहरू अपडेट हुँदैन! यहाँ फिक्स छ। - आईफोन
कसरी ipad मा ध्वनि समायोजन गर्न
आईट्यून्स कसरी कनेक्ट गर्ने जब आईप्याड असक्षम छ
किन मेरो आईफोन ब्याट्री यति छिटो हराउँदैछ
नयाँ iTunes आईफोन पहिचान गर्दैन
© 2022 | planetlibre.es गोपनीयता नीति
मेरो आईफोन अनुप्रयोगहरू अपडेट हुँदैन! यहाँ फिक्स छ।
My Iphone Apps Won T Update
आईफोन अनुप्रयोगहरू उनीहरूको भर्खरको संस्करणहरूमा अद्यावधिक गर्नु सधैं राम्रो विचार हो - अनुप्रयोग विकासकर्ताहरूले बगहरू ठीक गर्न र नयाँ सुविधाहरूको परिचय दिन नयाँ अपडेटहरू राख्छन्। तर जब तपाईको आईफोन अनुप्रयोगहरू अपडेट हुँदैनन् तपाईं के गर्न सक्नुहुनेछ? पत्ता लगाउन को लागी पढ्नुहोस् वास्तवमै के हुँदैछ जब तपाईंको आईफोन अनुप्रयोगहरू अपडेट हुँदैनन् र केहि सरल तरिकाहरू सिक्नुहोस् जुन तपाईं आईफोन अनुप्रयोग फिक्स गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको आफ्नै घरको आरामबाट डाउनलोड हुँदैन।
लाइसेन्स बिनाको कार बीमा
आईफोन प्रयोगकर्ताहरूको दुई प्रकारहरू
संसारमा दुई प्रकारका व्यक्तिहरू छन्: जसले आफ्ना आईफोनमा दर्जनौं सानो रेड सूचनाहरू मान्दैनन्, र जसले अन्तिम बलबुल सम्म सजिलै आराम गर्न सक्दैनन् उनीहरूलाई अपडेट, ईमेल, वा सन्देशमा सचेत गराउँदा ध्यान दिइन्छ। को
म दोस्रो समूहमा पर्दछु। कुनै पनि समयमा मेरो अनुप्रयोग स्टोर आइकनले एक आईफो अनुप्रयोग अपडेटमा सचेत गराएको टेलटेल रातो बबल भेट्छ, पछिल्लो संस्करण 'छिटो' भन्दा छिटो प्राप्त गर्न म उफ्रन्छु।
त्यसैले तपाईं मेरो निराशा कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, र म तपाईंको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, जब ती आईफोन अनुप्रयोगहरू अपडेट हुँदैनन्। यो एक समस्या हो जुन आईफोन प्रयोगकर्ताहरूको धेरै कष्ट दिन्छ!
म किन मेरो आईफोनमा अनुप्रयोगहरू अपडेट गर्न सक्दिन?
धेरै जसो समय तपाई आईफोनमा अनुप्रयोगहरू अपडेट गर्न सक्नुहुन्न किनकि तपाईको आईफोनसँग पर्याप्त भण्डारण ठाउँ छैन, वा किनभने त्यहाँ स्थिर सफ्टवेयर समस्या छ जुन ठीक गर्न आवश्यक पर्दछ।
तलका चरणहरूले तपाईंलाई निदान गर्न र वास्तविक कारणलाई समाधान गर्न मद्दत गर्दछ किन तपाईंको आईफोन अनुप्रयोगहरू अपडेट हुँदैनन्!
अपडेट वा नयाँ अनुप्रयोगहरूको लागि कुनै कोठा छैन
तपाईंको आईफोनसँग भण्डारण ठाउँको सीमित मात्रामा अनुप्रयोगहरूले त्यो भण्डारण ठाउँको अधिक लिन सक्दछ। यदि तपाईंको आईफोनले अनुप्रयोगहरू अपडेट गर्दैन भने, तपाईंसँग अपडेट पूर्ण गर्न पर्याप्त भण्डारण ठाउँ नहुन सक्छ।
तपाईंको आईफोनमा अनुप्रयोगहरूको लागि कोठाको मात्रा तपाईंले खरीद गर्नुभएको आईफोनको प्रकारमा निर्भर गर्दछ।
नोट: जीबी भनेको हो गीगाबाइट । त्यो डिजिटल डाटाका लागि मापनको एकाई हो। यस केसमा, यो तपाईंको आईफोनले चित्रहरू, अनुप्रयोगहरू, सन्देशहरू, र अन्य जानकारी भण्डारण गर्न कोठाको वर्णन गर्न प्रयोग गर्दछ।
तपाईं आफ्नो आईफोनमा गएर भण्डारणको मात्रा जाँच गर्न सक्नुहुनेछ सेटिंग्स -> सामान्य -> आईफोन भण्डारण । तपाईले देख्नुहुनेछ कति भण्डारण प्रयोग गरिएको छ र कति उपलब्ध छ। यदि तपाइँ उत्सुक हुनुहुन्छ कि कुन अनुप्रयोगहरूले तपाइँको भण्डारण ठाउँ निल्दैछ, तल स्क्रोल गर्नुहोस् र तपाईले एउटा सूची देख्नुहुनेछ कुन अनुप्रयोगहरूले तपाइँको आईफोनमा अधिक ठाउँ लिइरहेको छ।
अनुप्रयोग अद्यावधिकहरूको लागि कसरी ठाउँ बनाउने
यदि तपाईं लगभग ठाउँ को बाहिर हुनुहुन्छ भने, तपाईं आईफोन अनुप्रयोगहरू अपडेट गर्न वा नयाँ डाउनलोड गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। अनुप्रयोगहरू हटाउन यो सजीलो छ तपाईले अब नयाँ व्यक्तिको लागि कोठा बनाउन प्रयोग गर्नुहुन्न।
थिच्नुहोस् र अनुप्रयोगमा होल्ड गर्नुहोस् जुन तपाईं अनइन्स्टल गर्न चाहानुहुन्छ मेनू देखा पर्दासम्म। त्यसपछि, ट्याप गर्नुहोस् अनुप्रयोग हटाउनुहोस् । ट्याप गर्नुहोस् अनुप्रयोग मेटाउनुहोस् जब कन्फर्मेसन अल्टर पर्दामा देखा पर्दछ।
पाठ वा iMessage कुराकानी, चित्र, र भिडियो अन्य सम्भावित मेमोरी हग हुन्। लम्बाईका कुराकानीहरू मेटाउनुहोस् र तपाईंको आईफोनमा ठाउँ बचत गर्न मिडियालाई तपाईंको कम्प्युटरमा सार्नुहोस्। तपाईले यसमा केहि भण्डार सिफारिशहरू पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ सेटिंग्स -> सामान्य -> ​​आईफोन भण्डारण ।
एकचोटि तपाईंले आफ्नो आईफोनमा कोठा खाली गर्नुभयो, फेरि आईफोन अनुप्रयोग अपडेट डाउनलोड गर्न प्रयास गर्नुहोस्। समस्या अब समाधान हुन सक्छ कि भण्डारण ठाउँ खाली छ।
मेरो आईफोन अनुप्रयोगहरू अझै अपडेट छैन
यदि तपाईंसँग तपाईंको आईफोनमा प्रशस्त ठाउँहरू छन्, वा तपाईंले अधिक ठाउँ बनाउनुभयो र आईफोन अनुप्रयोग अझै अपडेट हुनेछैन भने, अर्को चरणमा जानुहोस्।
विस्थापनको प्रयास गर्नुहोस्, त्यसपछि अनुप्रयोग पुन: स्थापना गर्नुहोस्
यदि अनुप्रयोग अद्यावधिक हुँदा रोकिन्छ भने, एक सफ्टवेयर मुद्दा वा बिग्रिएको अनुप्रयोग फाईल तपाईको आईफोन अनुप्रयोगले अपडेट नगरेको कारण हुन सक्छ। तपाईं अनुप्रयोग विस्थापित गर्न सक्नुहुनेछ र यो पुन: स्थापना गर्नुहोस् समान चरणहरू अनुसरण गरेर तपाईंले अपडेटको लागि स्थान बनाउन प्रयोग गर्नुहुनेछ:
तपाइँको औंलालाई अनुप्रयोग आइकनमा होल्ड गर्नुहोस् र हिलाउनको लागि कुर्नुहोस्।
अनुप्रयोगको स्थापना रद्द गर्न माथिको बाँया कुनामा X मा क्लिक गर्नुहोस्।
कम्तिमा seconds० सेकेन्डको लागि तपाईको आईफोनलाई बन्द गर्नुहोस्, फेरी यसलाई फेरि खोल्नुहोस्।
App Store मा जानुहोस् र तपाईंले भर्खरै मेटाउनुभएको अनुप्रयोगको लागि खोजी गर्नुहोस्।
फेरि अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्।
अनुप्रयोग पुनर्स्थापनाले तपाईंको प्रयोगकर्ता डेटा अनुप्रयोगबाट हटाउनेछ, त्यसैले यो पक्का गर्नुहोस् कि तपाईंले लग ईन गर्न आवश्यक पर्ने कुनै पनि जानकारी बचत गर्नुभयो।
के तपाईको इन्टर्नेट जडानलाई दोष दिन सकिन्छ?
आईफोन अनुप्रयोग अद्यावधिक डाउनलोड गर्न, तपाई वा कि त वाइफाइ वा तपाईंको सेलुलर नेटवर्कमा जडान हुनु आवश्यक छ। तपाईको आईफोन लाई पनि यो जान्नुपर्दछ कि अनुप्रयोग अपडेट डाउनलोड गर्न त्यो जडान प्रयोग गर्न ठीक छ।
निश्चित बनाउनुहोस् हवाइजहाज मोड सकिएको छैन
यदि हवाइजहाज मोड खोलिएको छ भने, तपाईं आफ्नो आईफोनमा अनुप्रयोगहरू अपडेट गर्न सक्षम हुनुहुने छैन किनकि तपाईं वाइफाइ वा तपाईंको सेलुलर नेटवर्कमा जडान हुनुहुने छैन। हवाइजहाज मोड बन्द भएको छ भनि निश्चित गर्न, सेटिंग्स अनुप्रयोग खोल्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि हवाइजहाज मोड पछाडि स्विच बाँया पट्टि स्थित छ।
इन्टर्नेट जडान जाँच गर्नुहोस्
अनुप्रयोग अद्यावधिकहरू डाउनलोड गर्न वाइफाइ नेटवर्क प्रयोग गर्नु राम्रो हो किनभने यसले तपाईंको सेलुलर डाटा योजना प्रयोग गर्दैन। यो जान्नु पनि महत्वपूर्ण छ कि १०० मेगाबाईट वा बढीका अनुप्रयोग अपडेटहरू Wi-Fi मा मात्र डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
तपाइँको आईफोनमा गएर वाइफाइ नेटवर्कमा जडान भएको छ कि छैन भनेर तपाइँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ सेटिंग्स -> वाइफाइ । वाइफाइ विकल्पको पछाडिको स्विच हरियो हुनुपर्दछ, र तपाईं हुनुहुन्छ नेटवर्कको नाम यसको तल देखा पर्दछ।
यदि तपाईं वाइफाइसँग जडित हुनुहुन्न भने, बक्सलाई छेउमा ट्याप गर्नुहोस् वाइफाइ विकल्प वाइफाइ खोल्नको लागि। नेटवर्क छनौट गर्नुहोस् स्थानीय वाइफाइ विकल्पहरूको सूचीबाट। तपाईंको आईफोन अनुप्रयोगहरू फेरि अपडेट गर्ने प्रयास गर्नुहोस् वाई-फाई सकृयता सकियो ..
अनुप्रयोगहरू अद्यावधिक गर्न सेलुलर डाटा प्रयोग गर्नुहोस्
यदि तपाईंसँग Wi-Fi छैन भने, तपाईं अनुप्रयोगहरू अद्यावधिक गर्न आफ्नो सेलुलर नेटवर्क जडान प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको सेलुलर जडान जाँच गर्न, सेटि Settingsहरू खोल्नुहोस् र सेलुलर ट्याप गर्नुहोस्। सेलुलर डेटा पछाडि स्विच हरियो हुनु पर्छ।
तपाईं त्यहाँ हुँदा, सेलुलर डाटा विकल्प मेनू अन्तर्गत रोमिaming भ्वाइस र डाटामा सेट गरिएको छ भनेर निश्चित गर्न जाँच गर्नुहोस् । यसले निश्चित गर्दछ कि तपाईं नेटवर्कमा जडान गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंको आईफोनले सोच्दछ भने तपाईं आफ्नो घर क्षेत्र बाहिर हुनुहुन्छ।
नोट: धेरै अमेरिकी सेलुलर योजनाहरु तपाई रोममा हुँदासम्म थप शुल्क लिदैनन्। यदि तपाइँसँग रोमि charges चार्जहरू वा तपाइँको योजनाले कभर गर्ने बारेमा प्रश्नहरू छन् भने, तपाइँको क्यारियरको साथ जाँच गर्नुहोस् वा कल गरिएको हाम्रो लेख पढ्नुहोस् सेलुलर र आईफोनमा डाटा रोमि Are्ग के हुन्?
अनुप्रयोगहरू स्वचालित रूपमा सेलुलरमा अपडेट हुँदै छैनन्?
सेटिंग्स खोल्नुहोस् र अनुप्रयोग स्टोर ट्याप गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि अनुप्रयोग अपडेटहरूको पछाडि स्विच खुला छ। जब एक अनुप्रयोग अपडेट उपलब्ध छ, यो अब स्वत: डाउनलोड हुनेछ यदि तपाईंसँग वाइफाइ छैन भने पनि।
नेटवर्क सेटिंग्स रिसेट गर्नुहोस्
एक अन्तिम युक्ति यो सुनिश्चित गर्न को लागी प्रयास गर्नुहोस् कि तपाईंको जडान समस्या होइन तपाईंको सबै नेटवर्क सेटिंग्स वाइप गर्दैछ। यसले तपाइँको आईफोनले यसलाई प्रयोग गरिरहेको वाइफाइ नेटवर्क बिर्सनेछ। यसले आईफोन नयाँ भएको बेलामा कुनै पनि जडान सेटिंग्स फिर्ता आउँदछ।
यदि एक जडान सेटिंग आईफोन अनुप्रयोगहरूको लागि दोष छ जुन अद्यावधिक हुँदैन, यसमा समस्या समाधान गर्ने राम्रो मौका छ। तपाईंले आफ्नो Wi-Fi नेटवर्कमा फिर्ता लग इन गर्नुपर्नेछ, त्यसैले यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग तपाईंको Wi-Fi पासवर्ड उपयोगी छ।
तपाईंको नेटवर्क सेटिंग्स रिसेट गर्न, जानुहोस् सेटिंग्स -> सामान्य -> ​​रिसेट -> नेटवर्क सेटिंग्स रिसेट गर्नुहोस् ।
अनुप्रयोग स्टोरको साथ समस्या
कहिलेकाँही आईफोन अनुप्रयोगहरू अपडेट हुँदैन किनभने त्यहाँ अनुप्रयोग स्टोरको साथ समस्या छ। जबकि यो असम्भव छ, App Store सर्भर तल जान सक्छ। एप्पलले अनुप्रयोग स्टोरमा उनीहरूको जाँच गरेर समस्या आएको छ कि छैन भनेर जाँच गर्न सक्नुहुनेछ प्रणाली स्थिति वेबसाइट ।
रोक्नुहोस् र अनुप्रयोग स्टोर पुन: सुरु गर्नुहोस्
यदि अनुप्रयोग स्टोर सर्भरहरू चालू र चालु छन्, तर तपाईंको आईफोन अनुप्रयोगहरू अपडेट हुँदैनन्, तपाईंको आईफोनमा एप स्टोरसँग एक सानो सफ्टवेयर मुद्दा हुन सक्छ। यो सम्भावित समस्या समाधान गर्न, हामी अनुप्रयोग स्टोर बाहिर बन्द र फेरि खोल्नेछौं।
अनुप्रयोग स्टोर बन्द गर्नका लागि, घर बटनमा प twice्क्तिमा दुई पटक क्लिक गर्नुहोस्। त्यसोभए, स्क्रिन अप र स्क्रिन बन्द एप स्टोर स्वाइप गर्नुहोस्। केहि सेकेन्ड पर्खनुहोस्, त्यसपछि अनुप्रयोग स्टोर पुन: खोल्नुहोस्।
तपाईंको एप्पल आईडी जाँच गर्नुहोस्
अझै काम गरिरहेको छैन? निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं अनुप्रयोग स्टोरमा सही एप्पल आईडीको साथ लग इन हुनुहुन्छ, तब अनुप्रयोग स्टोरबाट लग आउट गरेर फेरि भित्र जानुहोस्। यसो गर्न:
खोल्नुहोस् सेटिंग्स ।
स्क्रिनको शीर्षमा तपाईंको नाममा ट्याप गर्नुहोस्।
तल स्क्रोल गर्नुहोस् र ट्याप गर्नुहोस् साइन आउट गर्नुहोस् ।
जब तपाईं लग आउट गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई फेरि सेटिंग्सको मुख्य पृष्ठमा लगिनेछ। ट्याप गर्नुहोस् तपाईको आईफोनमा साइन इन गर्नुहोस् तपाईंको एप्पल आईडीमा पुन: लगइन गर्नको लागि स्क्रिनको शीर्षमा।
अनुप्रयोग स्टोर क्याच खाली गर्नुहोस्
अन्य अनुप्रयोगहरू जस्तै यस अनुप्रयोगले अक्सर प्रयोग गर्ने जानकारीको ब्याकअप राख्दछ, त्यसैले यो छिटो काम गर्न सक्दछ। जहाँसम्म, जानकारीको यस क्यासको साथ समस्याहरूले अनुप्रयोग स्टोरमा समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ, जस्तै तपाईंको आईफोन अनुप्रयोगहरूलाई अपडेट गर्नबाट रोक्न।
तपाईंको अनुप्रयोग स्टोर क्यास खाली गर्न, App Store खोल्नुहोस् र पछाडि १० पटक स्क्रिनको तल ट्याबहरू मध्ये एउटामा ट्याप गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ पट्टिको १० पटक उही ठाउँ ट्याप गर्नुहोस्। स्क्रिन खाली फ्ल्यास हुनुपर्छ र अनुप्रयोग स्वचालित रूपमा पुन: लोड हुनेछ।
तपाईंको कम्प्युटरमा स्वचालित अपडेटहरू खोल्नुहोस्
यदि तपाइँका अनुप्रयोगहरू तपाइँको आईफोनमा अपडेट हुँदैनन्, तपाइँसँग तपाइँको कम्प्यूटरमा राम्रो भाग्य अपडेट गर्ने अनुप्रयोगहरू हुनसक्दछन्। तपाइँको कम्प्युटरबाट स्वचालित अपडेटहरू खोल्नको लागि, तपाइँको आईफोनलाई तपाइँको कम्प्यूटरमा लाइटनिंग केबल प्रयोग गरेर जडान गर्नुहोस्, त्यसपछि आईट्यून्स खोल्नुहोस्।
यो विकल्प Macs Catalina १०.१5 वा नयाँ चलाउँदै गरेको म्याकहरूमा उपलब्ध छैन।
क्लिक गर्नुहोस् आईट्यून्स स्क्रीनको माथिल्लो बायाँ कुनामा र क्लिक गर्नुहोस् प्राथमिकताहरू ।
अन्तमा, डाउनलोड ट्याब क्लिक गर्नुहोस्, सबै बक्सहरू जाँच गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् ठिक छ ।
गयो, अनुप्रयोग अपडेट सूचनाहरू!
यदि तपाईंले यी सबै चीजहरू कोशिस गर्नु भएको छ, र केहि पनि काम गरेको देखिंदैन भने, तपाईं सक्नुहुन्छ तपाईको आईफोन मेट्नुहोस् र पुन: भण्डार गर्नुहोस् । यसले आईफोनबाट तपाईका सबै सेटि settingsहरू र अनुप्रयोगहरू हटाउनेछ, त्यसैले तपाईले नयाँ जस्तै फेरि सेटअप गर्नुपर्नेछ।
मेरो आईफोन आफै बन्द हुन्छ
यो अविश्वसनीय रूपमा निराश हुन सक्छ जब तपाइँको आईफोन अनुप्रयोगहरू अपडेट हुँदैनन्। जे होस्, अब तपाईंसँग उपकरण र चालहरू छन् तपाईंले यो समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ।
के तपाईंसँग आईफोन अनुप्रयोगहरू अपडेट हुनको लागि अर्को मनपर्दो तरीका छ? हामीलाई टिप्पणीहरूमा थाहा दिनुहोस्!
फोटो र भिडियो
फाइदा र बेफाइदा
फ्रेन्च प्रेस को लागी सबै भन्दा राम्रो कफी
Cr Ito U00E9Dito
पत्थर र खनिज
एप्पल लोगो मा आईफोन स्टक? यहाँ रियल फिक्स छ।
444 को अर्थ? - आध्यात्मिक परी संख्या
म कसरी आईफोन X, XS, XS अधिकतम, र XR मा ब्याट्री प्रतिशत देखाउन? फिक्स!
सेलुलर र आईफोनमा डाटा रोमि Are्ग के हुन्? अन वा अफ?
मेरो आईफोन घुमाउँदैन। यहाँ वास्तविक फिक्स छ!
किन मेरो आईफोन डिमिंग राख्दछ? यहाँ सत्य छ!
किन मेरा केही सम्पर्कहरू मेरो आईफोन, आईप्याड, वा आइपडबाट हराइरहेका छन्? यहाँ वास्तविक फिक्स छ!
एप्पल वाच अपडेट स्टक अन रोकिएको छ? यहाँ फिक्स छ!
मेरो आईफोनले भन्यो 'कुनै सेवा छैन' यहाँ अन्तिम समाधान छ!
अनुप्रयोग स्टोरले आईफोनमा 'प्रमाणिकरण आवाश्यक' भन्दछ? यहाँ किन र फिक्स!
आर्कटिक P324 BT हेडसेट: तपाइँको कसरत सुधार!
म कसरी आईफोनमा मेरो स्थान साझेदारी गर्ने? साधारण गाईड।
के गर्नु पर्छ यदि तपाइँको दाँत उपचार पछि सार्दै छ (टिप्स)
जहाँ म मेरो आईफोन स्क्रिन बदल्न सक्छु? आज यसलाई मिलाउनुहोस्!
संयुक्त राज्य अमेरिका मा कामदार क्षतिपूर्ति
कालो पुतली को अर्थ
आईफोन स्वचालित अपडेटले काम गरिरहेको छैन? यहाँ वास्तविक फिक्स छ!
२०१ 2017 मा परिवारका लागि सर्वश्रेष्ठ सेल फोन योजनाहरू सत्य!
आईफोन भण्डारणमा 'अरू' के हो? यहाँ सत्य छ र यसलाई कसरी मेटाउने!
कसरी DFU मोड मा एक आईफोन राख्ने, एप्पल तरीका